Inona no hitondran'ny Bluetooth 4.1 vaovao antsika | Vaovao IPhone
El Bluetooth Nanjary iray amin'ireo singa ilaina indrindra amin'ny fitaovantsika izy io. Nanomboka tamin'ny famerenana saika ny fampiasana finday maimaimpoana tao anaty fiara, na ny famindrana rakitra (zavatra tena voafetra ao amin'ny fitaovan'ny iOS), dia nanjary tena nilaina tokoa izany ho antsika izay te-hahazo tombony amin'ny finday avo lenta. : mijery telefaona finday, fitaovana «fahasalamana», fanamafisam-peo tsy misy tariby ary «headphone» ... Ary mazava ho azy fa miteraka fijaliana ny baterin'ny fitaovantsika. Ilay Bluetooth 4.1 vaovao dia toa tonga hamaha ny ampahany amin'ity olana ity, miaraka amin'ny ambany ny fanjifana sy ny fampisehoana tsaratsara kokoa noho ny kinova ankehitriny, 4.0.
Ny Bluetooth 4.1 vaovao dia hanatsara ny anao fandrindrana miaraka amin'ny modem an-tariby. Izany dia tsy hamela ny fitaovantsika mifandraika amin'ny finday avo lenta hifandray amin'ny Internet ihany koa, fa hanatsara ny fanjifana bateria koa, satria ny modem dia tsy mila manamafy ny fambara mba hialana amin'ny fanelingelenana amin'ny Bluetooth.
Fanatsarana lehibe iray hafa no hitranga miaraka amin'ny fifandraisana. Azo antoka fa na iza na iza mampiasa kojakoja mampifandray amin'ny fitaovany amin'ny alàlan'ny Bluetooth dia ho very ny fifandraisana rehefa miala aminy, ary rehefa manatona azy indray izy ireo dia tsy nifandray intsony. Ny Bluetooth 4.1 vaovao dia hampitsahatra an'izany, satria rehefa very ny fifandraisana dia hikaroka indray mandeha indray izy hamerina azy io raha vantany vao misy indray.
Hisy fanatsarana ihany koa miaraka amin'ny famindrana angon-drakitra, mamela ny "fonosana" feno hamindra fa tsy angon-drakitry ny tsirairay, amin'izay hahatratrarana fahombiazana tsara kokoa.
Na dia mbola tsy manana daty ahatongavan'ity Bluetooth 4.1 vaovao ity amin'ny fitaovantsika aza isika dia antenaina fa tsy haharitra ela izany. Ho fanampin'izay, ny fanavaozana dia ho eo amin'ny haavon'ny lozisialy, noho izany ny fanavaozana dia hahafahanao mankafy ireo fanatsarana ireo amin'ny fitaovanao raha vantany vao misy izy ireo.
Fanazavana fanampiny - Apple dia miasa amin'ny iWatch misy fifandraisana Bluetooth LE mipetaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Izay hoentin'ny Bluetooth 4.1 vaovao antsika